Kaddib Saxiixyada Hakim Ziyech & Timo Werner wax ka ogow 11-ka xiddig ee ugu mushaharka badan Kooxda Chelsea – Gool FM
Kaddib Saxiixyada Hakim Ziyech & Timo Werner wax ka ogow 11-ka xiddig ee ugu mushaharka badan Kooxda Chelsea
(London) 07 Juun 2020. Kaddib markii ay Kooxda Chelsea gacanta ku soo dhigtay Hakim Ziyech & Timo Werner, waxaana la soo bandhigay xiddigaha ugu mushaharka badan naadiga Blues, waxaana soo qaadan doonnaa 11-ka ugu mushaharaadka badan kooxda reer London.
Chelsea heshiiska Weeraryahanka Kooxda RB Leipzing ee Timo Werner, waxaa kaga harsan kaliya inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo, kaddib markii ay ka dul qaaday saxiixiisa ama kaga adkaatay Kooxo waa weyn oo ay ka mid tahay Liverpool.
Macallinka Chelsea ee Frank Lampard oo xiddigo u badan kuwo da’yar ah isku aad-aadistay oo qaarkoodna amaah ka soo ceshtay ayaa ku dagaalamay, waxaana hadda ay saddex dhibcood ka sarreeyaan Man United oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka.
Sidoo kale Blues ayaa bishii Febraayo ay shaacisay iibka Hakim Ziyech, kaasoo ay ka soo qaateen Ajax, waxaana uu haatan ku soo wajahan yahay bisha July garoonka Stamford Bridge, halka Werner uu boorsooyinkiisa u soo xirxiran doono dhammaadka xilli ciyaareedkan galbeedka Magaalada London.
Waxaa haddaba la shaaciyey kaddib saxiixyada Blues ee Ziyech iyo Werner 11-ka ciyaaryahan ee ugu mushaharka badan kooxda Chelsea, iyadoo la raacayo heshiisyada xiddigaha iyo gunnooyinka ay qaadanayaan.
Xiddiga reer Jarmal ee Timo Werner ayaana ah laacibka ugu mushaharka badan Blues oo dhan, isagoo todobaadkii jeebka ku shuban doona 170 kun oo guni, waxaana uu ka sare mari doonaa haddii heshiiskiisa lagu dhawaaqo xiddigaha markii hore ugu mushaharka badnaa Chelsea ee Kepa Arrizabalaga iyo N’Golo Kante.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 11-ka ciyaaryahan ee ugu mushaharka badan Kooxda kubadda cagta Chelsea kaddib saxiixyada Hakim Ziyech & Timo Werner & Mushaharka uu mid waliba qaadan doono todobaadkii:-
1- Timo Werner – £170,000 Todobaadkii
2- Kepa Arrizabalaga – £150,000 Todobaadkii
3- N’Golo Kante – £150,000 Todobaadkii
4- Christian Pulisic – £145,000 Todobaadkii
5- Willian – £120,000 Todobaadkii
6- Callum Hudson-Odoi – £120,000 Todobaadkii
7- Jorginho – £110,000 Todobaadkii
8- Olivier Giroud – £110,000 Todobaadkii
9- Mateo Kovacic – £105,000 Todobaadkii
10- Ross Barkley – £100,000 Todobaadkii
11- Pedro – £100,000 Todobaadkii